Raysal Wasaaraha Turkiga oo balan qaaday isbadalo,kadib guushii Doorashada Dalkaas – SBC
Raysal Wasaaraha Turkiga oo balan qaaday isbadalo,kadib guushii Doorashada Dalkaas
Raysal Wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa balan qaaday isbadalo,kadib guushii ay xisbigiisu kasoo hoyeen doorashadii baarlamanka dalkaasi,waxaana taasi ay u ogolaatay in mar sadexaad uu talada dalkaasi sii hayo.
Cod bixintii maalintii shalay ka dhacday Turkiga,waxaa ay natiijadeedii u ogolaatay 50% in ay ku guulaystaan xisbiga raysal wasaare Ordogan ee AKP.
AKP waxaa ay heshay in ka badan 326 kursi oo kamid ah,kuraasta baarlamaanka dalkaasi,waxaana ay tiradaasi u ogolaan kartaa xisbiga AKP in mooshinka kasta oo ay keenaan si sahal ay ku ansixiyaan.
Kadib markii ay soo shaac baxday natiijada cod bixinta doorashada baarlamaanka,waxaa uu raysal Wasaare Ordogan kula hadlay kumanaan kamid ah shacabka dalkaasi xarunta turkiga ee Istanbul,iyadoona uu u balan qaaday dhamaan shacabka Turkiga in uu fulinayo dhamaan balan qaadyadii uu u sameeyay kahor doorashada.
Raysal Wasaaraha Turkiga waxaa hor yaala qodobo badan oo laga doonayo fulinteeda,iyadoona qodobka dastuurka uu yahay kan ugu horeeya ee la filayo in uu bilaabo qaabka lagu hirgalinayo.
Dowlada Turkiga oo lagu tilmaamo in ay tahay Dowlad calmaani ah oo dhinaca reer galbeedka u janjeerta ayaa hadana raysal Wasaare Ordogan waxaa uu balan qaad ugu sameeyay shacabka Falastiinyiinta in uu la garab taagnaan doono taageero kasta oo ay u baahan yihiin.